Naannolee arfaasaan oomishan keessatti roobni cimaan akka jiraatu Eejansiin Meetrooloojii Biyyaalessaa beeksiseera – Fana Broadcasting Corporate
Naannolee arfaasaan oomishan keessatti roobni cimaan akka jiraatu Eejansiin Meetrooloojii Biyyaalessaa beeksiseera
Finfinnee, Eebila 1, 2011(FBC)-Ji’oottan 2n dhufanitti naannolee Arfaasaan oomishanii fi fayyadamaa ta’anitti roobni cimaan itti fufee akka jiraachuu danda’u daayreektarri ol aanaa Eejansii Meetrooloojii Biyyaalessaa obbo Faxxanaa Tashoomaa dubbataniiru.
Iddoowwan rooba Arfaasaan irra caalaa fayyadamoo ta’anis kutaalee Kibbaa fi Kibba Baha Ityoophiyaa ta’uu ibsameera.
Akka ragaa Eejansii Meetrooloojii Biyyaalessaatti roobni naannolee kanneeniti roobu walumaagalatti jiddu galeessaan hanga %70 ni gahas jedhameera.
Kutaaleen naannoo Oromiyaa baay’ee fi naannoon Ummatoota Kibbaa baay’een oomishtoota Arfaasaa ol aanaa ta’uu ibsameera.
Daayreektarri ol aanaa Eejansii Meetrooloojii Biyyaalessaa obbo Faxxanaa Tashoomaa ibsa guyyaa kaleessaa kennaniin akka hubachiisanitti, ji’oottan 2n Arfaasaa kanatti roobni fooyya’aan akka jiraatu mallattooleen meetrooloojii irraa argaman kan mul’isu ta’uu dubbataniiru.
Ministeerri Qonnaas bara oomisha Arfaasaa baranaatti oomisha oomishamu guddisuuf hojjechaa jiraachuus ni dubbata.
Ministir deettaan Ministeera Qonnaa obbo Sanii Radii wayitii Arfaasaa kana oomisha kuntaala miiliyoona 60 sasabuuf karoorfachuu isaanii FBCf ibsaniiru.
Ministeerri Qonnaa karoora kana galmaan gahuufis oomisha qonnaa ooyruu waldaangeessuuf xiyyeeffannoo ol aanaa kennuun nan hojjedhas jedheera.